कुन महिनामा जन्मेका युवतीको चरित्र कस्तो हुन्छ ? ‘ज्योतिष बिज्ञान’ यसो भन्छ ! « गोर्खाली खबर डटकम
बैसाख – यो महिनामा जन्मिएका महिला सामान्यतय सुन्दर आँखा भएकी हुन्छन् । यी महिलाको स्वभाव सरल र सहज हुन्छ । यी महिलाहरू कम खर्च गर्ने तर धेरै क्रो’ध भएका हुन्छन् । उनीहरूको जीवनमा धन र सुख प्रशस्त प्राप्त हुन्छ।
जेष्ठ – यो महिनामा जन्मिएका महिलाहरू तिष्ण बुद्धि भएका हुन्छन् । उनीहरूको जीवनमा सुख र सम्पती सहज तरिकाले प्रप्त गर्छन। यो महिना जन्मेको महिलाहरु सधै सफलता हातपार्छन् । धार्मिक रुपमा बढी आस्था राख्ने गर्दछन् । जीवन साथीको राम्रो साथ पाउँछन् । उनीहरूका श्रीमान् धर्मप्रती त्यती आस्था नराख्ने भएको कारण कहिले काँही म’नमुटब हुन्छन् ।
आषाढ – आषाढमा जन्मिएका महिलाहरू मीठो बोली बोल्छन् । उनीहरूको आवाजमा मधुरता हुन्छ । उनीहरूका श्रीमानको स्वभाव पनि राम्रो हुन्छ । कडा मेहनत र सं’घर्षमा पनि उनीहरूले सोँचे जस्तो सुख र धन प्राप्त नहुन सक्छ ।
साउन – यो महिनामा जन्मिएका महिलाहरू राम्रो र धार्मिक काममा बढी रुचि राख्ने स्वभाबको हुन्छ । यो महिना जन्मेका महिलाले सुख, दुःख, फइदा र नो’क्सान समान रुपले भोग्नु पर्छ । सन्तानबाट सुख प्रप्त गर्छन् । यो महिना जन्मेको महिलाहरु धेरै जसो समय कुनै न कुनै बिरामीबाट ग्रसित हुन्छन् । श्रीमान् र प्रेमीबाट धेरै मायाको आश राख्ने स्वभाबको हुन्छन् ।
भाद्र – यो महिनामा जन्म लिएका महिलाहरूको मिठो बोली र सरल स्वभाव उनीहरूको विशेषता हो । उनीहरूलाई श्रीमानबाट पनि अत्यन्तै सुख र प्रेम मिल्छ । घरपरिवार सासु ससुराबाट माया र सम्मान प्राप्त गर्छन् । यी महिलाहरू अलि जि’द्दी स्वभावका पनि हुन्छन् । उनीहरूको जि’द्दीका कारण धेरैपटक समस्याहरू आइपर्दछ ।
कार्तिक – कात्तिकमा जन्म लिने महिला धनवान र बुद्धिमानी हुन्छन् । उनीहरू धेरै कलामा निपूर्ण हुन्छन् । मिठो बोल्छन् । सामान्यतय यी महिलाहरूले आफ्ना श्रीमानलाई आफ्नो अधिनमा राख्न चाहन्छन् । घरपरिवार सासु ससुरासँग पनि झ’गडा गर्ने तथा झ’गडालु हुन्छन् ।
पुष – पुष महिनामा जन्मेका महिलाहरू सामान्यतय अत्यन्तै क्रो’धी हुन्छन् । यी महिलाहरू आफ्नै कामबाट भाग्य निर्माण गर्ने खुबी राख्छन् । सबैसँग मिलजुल गर्ने स्वभावका कारण समाजमा मान सम्मान पाउँछन् । यी महिलामा टाउको दुख्ने, वायु र वाथ रोगको समस्या बढी देखिन्छ ।
माघ – माघमा जन्मिएका महिलाहरू सुन्दर अनुहारका हुन्छन् । सरल र सहज स्वभावका हुन्छन् तर अलि जि’द्दी स्वभाव र अरुलाई कुरा गर्दा पुरा कुरा गर्न नदिने स्वभावका हुन्छन् । यी महिलाहरू कमजोरीका कारण विभिन्न रोगको शि’कार हुने पनि देखिन्छ ।
चैत – यो महिनामा जन्मिएका महिला चलाख र चतुर हुन्छन् । सुन्दर हुनुका साथै चञ्चल स्वभावका कारण अरुलाई छिटो आकर्षण गर्छन् । धनबाट पनि उनीहरू लाभान्वित हुन्छन् । कहिलेकाहिँ उनीहरूमा क्रो’ध हा’वी हुनाले समस्या पनि ल्याउन सक्छ ।
आमा बुवानै गुमाएपछि किरिया बसेका तीन छोरीलाई अब भविष्यको चिन्ता, पढाई कसरी अघि बढाउने-साँझ विहान के खाने
जम्मु काश्मीर क्षेत्रमा परिमीसन प्रक्रियापछि मात्र विधानसभा चुनाव हुने
शरीरमा रगतको कमी भयो ? यी खानेकुरा खानुहोस्